Who were Bengali, so called Rohingya?: ဒေါက်တာဇါနည်သို့တိတိကျကျ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
Zarni နာမည်နဲ့ရေးလာတာတွေ့ တော့ ဒေါက်တာဇါနည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ် ။ ဒီတော့ ဒေါက်တာဇါနည်သို့နာမည်တပ်ပြီး တိတိကျကျ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ တစောင်ကို ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။ တချိန်က ဧရာဝတီအင်တာဗျူး တခုမှာ ဆရာ ဒေါက်တာအေးကျော်ရဲ့အင်တာဗျူး တခုကို မင်းက ချေပပြောဆိုတဲ့ အခါ သက်ကြီးရွယ်ကြီး ပညာရှင်တဦးကို စော်ကားမော်ကား ပြောထားတာတွေ့ ရတယ်။ ဒါကို ကိုယ့်ဖက်က ဘာမှ မချေပဘဲ နေခဲ့ တယ်။ အခုတခါ မင်းက ရခိုင်လူမျိုးတွေကို စော်ကား သလို ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် မင်းကို ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ် ။ ဒီ့အပြင် အခုကိစ္စက ရခိုင်လူမျိုး တခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အရေးအရာမို့ဒီကိစ္စကို ကိုယ်က ရှင်းလင်းမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ တွေးပြီး ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ခုဆိုရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေက ရခိုင်သမိုင်းရာဇ၀င်တွေကို ပို့ ပေးနေကြ ပြီဖြစ် လို့့မင်းလက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ မြန်မာစာနဲ့ရေးထားတဲ့ရခိုင်သမိုင်းရာဇ၀င်တွေ - အ၈င်္လိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ ရခိုင်သမိုင်းရာဇ၀င်တွေကို ပို့ ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် မင်းနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်။
ကောင်းပြီ ။ မင်းကို ရှင်းပြချင်တာက မင်းက သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ သူဆိုတော့ မင်းက ဒီလူမျိုးတွေအကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားလို့ လဲ ။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်က မင်းကို အစိမ်းသက်သက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က တော်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မင်းနားလည်ထားဖို့ လိုတယ် ။ သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီ လူမျိုးတွေဟာ အခု သူတို့ဘာကို တောင်းဆိုနေသလဲလို့မင်းထင်နေသလဲ ။ သူတို့ တောင်းဆိုနေတာ အချက်လေးချက် ရှိနေတာကို မင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ ပထမအချက်က သူတို့ မှာ အိမ်ထောင်သားမွေးခွင့် မရှိလို့ တဲ့ ၊ သဘောက လက်ထပ်ခွင့်မရှိလို့လက်မထပ်ရဘဲ နေရတယ်ပေါ့ကွာ ။ ဒီတော့ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာဆောင်တာတောင်မှ လက်ထပ်ပိုင်ခွင့်တောင်မှ မရဘူးပေါ့ ။ ဒီလိုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့မဆလ၊န၀တ၊နအဖ၊ အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက် ထိ အင်မတန် ကြီးမားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကြီး တခုပေါ့ ။ မင်းဒီလိုထင်သလို အနောက်နိုင်ငံက အဖြူလူမျိုးတွေကလဲ ဒီအတိုင်း ထင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘူးကွ ။
သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ လက်မထပ်ရဘူးဆိုရင် မင်းစဉ်းစားကြည့်ရမှာက မြန်မာနိုင်ငံကို သူတို့ဝင်ရောက်လာချိန်ကို တွက်ချက်ကြည့်ပေါ့ကွာ ။ မြန်မာနိုင်ငံလွပ်လွပ်ရေးရရှိချိန်မှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာခဲ့ တဲ့သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလိမ်လူမျိုးတွေဟာ အခုအချိန် ( ၂၀၁၁ ) ခုနှစ်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်ထိ လူဦးရေ သူတို့ ပြောသလို ( ၄-သန်း-ကနေ ၅-) သန်း ဘယ်ရှိမလဲ ကွ။ အဲဒီတုံးက ရှိနေတဲ့သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဟာ သောင်းဂဏန်း၊လောက်ဘဲ ရှိနေပါပေါ့လား။ ကောင်းပြီ ၊ လူဦးရေများပြားတာဟာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့သော်၎င်း ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာခြင်းနဲ့ သော်၎င်း ၊ နှစ်မျိုးစလုံးထဲက တမျိုးနဲ့ သော်၎င်း သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံးကို တခါတည်းပြုလုပ်၍ သော်၎င်း ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာ မင်းသိရမှာဘဲ ။ ဒီတော့ကာလွန်ခဲ့ တဲ့(၁၉၄၈- ) ခုနှစ်ကနေပြီး လူဦးရေ ဒီလောက်များပြားသွားတာဟာ လက်ထပ်ခြင်းရလို့ သာလို့ဖြစ်တယ် ဆိုရင် သူတို့ မှာ အစိုးရလက်ထက်တွေ အဆက်ဆက် လက်ထပ်ခွင့် ရှိနေလို့ ဘဲ ဖြစ်တာပေါ့ကွ ။ တကယ်လို့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်လာ၍ အခုလို လူဦးရေ များပြားလာတယ်ဆိုရင် သူတို့ ဟာ တရားမ၀င် လူမျိုးတွေပေါ့ကွ ။ ဒီတော့ ဒီလောက်များပြားသွာတာဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ နယ်အထိကို မင်းမရောက်ဖူးဖူးလေ ၊ ဒီတော့ မင်းက သူတို့ တွေရဲ့ပညာရေး သင်ကြားခွင့် မရှိဘူးဆိုတာကို ဘယ်သိမတုံး ။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်က အဲဒီနေရာမှာ အချိန်အတော်ကြီး ပညာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ ဖူးတော့ မင်းထက်ကိုယ်က ပညာသင်ကြားခွင့်ဆိုင်ရာအကြောင်းကို ပိုသိတာပေါ့။ မောင်တောမြို့ နယ်မှာ မူလတန်းအဆင့် အားလုံးသော အသက်ပြည့်သူ ( ၅ ) နှစ် အရွယ် ကျောင်းသားတိုင်းဟာ လူမျိုးဘာသာမရွေး ပညာသင်ကြားခွင့်ရတယ်။ ဒီလိုဘဲ မောင်တောမြို့ နယ် နယ်စပ် အောင်သပြေကျေးရွာ ပြီးတော့ အင်တူလာ ဘော်ဒူလာ ကျေးရွာအထိ မူလတန်းကျောင်းအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားတယ်။ အောင်သပြေကျေးရွာက လူငယ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေး ကျောင်းကို တက်ရောက်သင်ကြားခွင့် ရှိနေကြတယ် ။ တမန်းသားကျေးရွားက ဘင်္ဂလီလူမျိုးဖြစ်သူ ဟာမတ်ခေါ်တင်အေးကျော် ဟာ ကျန်းမာရေးမှူး သင်တန်းတက်ရောက် ခဲ့ လို့အခုထက်ထိ တမန်းသားကျေးရွာ ကျေးလက်ကျမ်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ် ။ အဲဒီရွာမှာ အားလုံးသောသူတွေဟာ အများအားဖြင့် အစ္စလမ်ဘာသာကိုယ်းကွယ်တဲ့မူဆလင်တွေ ဘဂ်လီတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့အစိုးရ၀န်ထမ်းကျောင်းဆရာတွေဟာ ဘင်္ဂလီ လူမျိုးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ တမန်းသား မူလတန်းကျောင်း၊ ခမောင်းဆိပ်မူလတန်းကျောင်း၊ ကြိမ်ချောင်း အလယ်တန်းကျောင်း ၊ အလယ်သံကျော် မူလတန်းကျောင်း၊မောင်တောမြို့ က ကျောင်းပေါင်းစုံတွေမှာ ဘ၈င်္လီ လူမျိုးတွေဟာ မူလတန်းကနေပြီး အထက်တန်းပညာအထိကို သင်ကြားပိုင်ခွင့် ရနေကြတယ်။ ကျောင်းသားတဦးဟာ မြို့ တွေမှာလို ကုန်ကျစရိတ်မကုတ်ဘဲ ကျောင်းတက်လာရုံနဲ့ပညာတတ်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ အဲဒီမောင်တောမြို့ နယ်မှာ ပညာသင်ကြားခွင့် မရပါဘူးလို့ပြောနေတာဟာ လိမ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မင်း သိဖို့လိုတယ် မောင်ဇါနည်။
စီးပွါးရေး လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိသော ကိစ္စ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်းဟာ -၁၉၈ရ- ခုနှစ် မတိုင်မှီအထိ နေခဲ့ ဖူးတာဘဲ ၊ -၈၈-အရေးအခင်းနဲ့မင်းက မဆိုင်တော့ မင်းကို နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ယှဉ်းပြီး မပြောပြတော့ဘူးကွာ။ မင်းကဒီမိုကရေီအရေးအခင်းနဲ့ဘာမှ မပါတ်သက်တော့ နိုင်ငံရေးရဲ့ပူသလား အေးသလား ဆိုတာကို မင်းက အရသာ မခံစားတတ်ဘူးလေ ။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွါးရေးလုပ်တာကို မလုပ်ရ မကိုင်ရလို့ကန့် ကွက်ခဲ့ ခြင်း ခံရတဲ့အလယ်လပ်တန်းစား လူတွေရဲ့ ပြသနာကို မင်းကြားဖူးခဲ့သလား၊ မန္တလေးဘီယာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒေါ်သန်းသန်းနုတို့လို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြောင်း ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် ။ ဒီတော့က သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေက- အလယ်အလပ်တန်းစားတွေက စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့် မရဘူးဆိုတာကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးကွ ။ လှေနဲ့သွားရင်း ငွေကောက်တာတို့၊ မှောင်ခိုလုပ်ရင်း ငွေတောင်းဖမ်းဆီးတာတို့ ဟာ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး လည်စင်းခံပေးနေရတဲ့ကိစ္စပြသနာကွ ။ သမိုင်းလိမ် ဘင်္ဂလီလူမျိုး တဦးတည်းကိုမှ ၀ကွက်ပြီး လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး တရားမ၀င်သွားလာနေသူတွေ ၊လူမှောင်ခို ဖြတ်ကူးနေတာတွေဟာ မောင်တောနဲ့နတ်မြစ်ကိုကျော်ပြီး တက်ကနက် နဲ့မြစ်နားရွာ ၊ ငခူရ ။ ကြိမ်ချောင်း ။ ဝေလာတောင်၊ လက်ဝဲတောင်ပြို ၊ ကွမ်သီးပင်၊ အလယ်သံကျော် ၊ ရှင်မဖြူ ကျွန်း၊ စတဲ့နယ်မြေတွေမှာ နေ့ စဉ်ဖြစ်ပွါးနေတဲ့သမိုင်းလိမ်ဘဂ်လီ လူမျိုးတွေရဲ့ စီးပွါးရေး နယ်မြေတွေကွ ။ ဒီတော့ကာ မင်းသိထားရမှာက စီးပွါးရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက် ။ ဒါဟာ လိမ်ညာနေတာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဲ ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၃ ၅ ) မျိုးသော လူမျိုးစု ရှိတယ်။ အဲဒီလူမျိုးတွေကို သန်ကောင်စာရင်းဋ္ဌါန နဲ့မှတ်ပုံတင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဋ္ဌါနတို့က မှတ်ပုံတင်ပေးနေတယ် ။ ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို အစိုးရက ခန့် မှန်းတွက်ချက်ပြီး ဆန်စပါး စားသောက်နုံးနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကို တွက်ချက်နိုင်ဖို့ထားရှိတဲ့အစိုးရဋ္ဌါနက မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ် ။ အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာ မဲပေးနိုင်တဲ့ သူတွေကို အတိအကျ မဲဆန္ဒရှင် ဘယ်ရွှေ့ဘယ်မျှ ဆိုတာ သိရအောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ မူလတန်းကျောင်းသား အရွယ် ဘယ်လောက် ဆိုတာကအစ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတန်းအထိ က ဘယ်လောက်အထိ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိရအောင် မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါနက တွက်ချက်ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ ဆယ်နှစ်တကြိမ် ကောက်ယူတဲ့သန်ကောင်စာရင်းအရ ရပ်ကွက်ကျေးရွာတွေမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ပြီး လူဝင်လူထွက်တွေကို သိသာတယ်၊ သေဆုံးတဲ့ သူကို မှတ်ပုံတင် လူဝင်မှု ဋ္ဌါနက မှတ်တမ်းတင်ထားသလို မွေးဖွါးလာသူ ခလေးတွေကို ဆေးရုံက မွေးစာရင်း လုပ်ပေးတယ် ။ ဒီတော့ခါ မွေးစာရင်းနဲ့သေစာရင်းနှစ်ခုကို တွက်ချက်ပြီး မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါနဟာ တိတိကျကျ လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်မှာမွေးလို့ဘယ်မှာမှ အမည်စာရင်းမပြုစု မတင်ပြနိုင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ တရားဝင် လူမျိုးတမျိုးပါလို့အသိအမှတ် ပြုပေးနိုင်မှာလဲ ။ ဒီတော့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်သူတွေကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ထုတ်မပေးတာဟာ ဘယ်သူကြ့ပုလုပ်တဲ့ပဋိပက္ခလဲကွ။
ကောင်းပြီ ၊ မှတ်ပုံတင် ရသွားတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ မသမာသူ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ဌါနက လူတွေကြောင့် လဒ်စားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အခုလို လူမျိုလို့လူမျိုးပျောက်အောင်အထိ ကြီးမားတဲ့ပြသနာဖြစ်လာတာဘဲကွ ။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက သူတို့ ပါတီရဲ့မဲအနိုင်ရလိုမှုကြောင့် ဘင်္ဂလီ လူမျိုးတွေကို မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သလို အဲဒီအချိန်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါနတွေ ၊ ရဲတွေ ၊ အကောက်ခွန်ဋ္ဌါနတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိသားစုကြီးပွါးချမ်းသာမှုအတွက် လဒ်စားခဲ့ လို့ သာ ဒီပြသနာက ဒီလို ဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို မှတ်ပုံတင်သာ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ပေးခဲ့ ရင် သူတို့ ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မနေဘဲ ရန်ကုနု မန္တလေးအထိ ခုန်တက်သွားမှာ ဖြစ်တယ် ။ ပြီးတော့ ဒီလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်မှုကို မထိမ်းထားဘဲ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စကို မထိမ်းထားဘဲ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးလိုက်ရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္နိုင်ငံက လူဦးရေ သန်း( ၂၀၀ ) နီးကပါးက သန်း ( ၅၀ ) လောက်က ၀င်လာနိုင်ခဲ့ ပြီဆိုရင် မင်းဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ မောင်ဇါနည်။
ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္နိုင်ငံက မူဆလင်လူမျိုးတွေနဲ့ဘာသာစကားအတူတူ ။ ယဉ်ကျေးမှုအတူတူ၊လူမျိုးတမျိုးထဲဖြစ်နေလို့ ဘဲ ။ သူတို့ ဟာ ဒီလောက် ကိစ္စကလေးလောက်နဲ့အခုလို ငွေကုန်ကြးကျ ခံနေတာမဟုတ်ဘူးကွ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို မူဆလင်ကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင် အစီအစဉ်နဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို မင်းနားလည်ဖို့ လိုတယ် ။ မင်းအနေနဲ့ဒီပြသနာရဲ့အတိမ်အနက်ကို သိလာတဲ့ အခါ နောင်တဆိုတာကို ရလာတဲ့အချိ်န်မှာ အဲဒီအချိန်ဟာ မင်းအတွက် နှမ ပေးတဲ့ အချိန် မင်းရဲ့ သားသမီးတွေကို ကုလားရင်ခွင်ထဲ မင်းကိုယ်တိုင် ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီကွ။ ဒါကြောင့် အစိုးရတွေဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာသူများကို ဘယ်တော့မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အဖြစ် အသိအမှတ် မပြူဘူးဆိုတာ မင်းနားလည်ထားဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုအသိတရားရှိတဲ့သူတွေဟာ အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့နိုင်ငံရေးကို လုပ်ကြတာကွ ။
ရခိုင်သမိုင်းနဲ့မြန်မာသမိုင်းများက ပြောသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ
ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာများမှာ ရှေးရခိုင်မင်းအဆက်ဆက်က အကြောင်းတွေကို ကျမ်းစာ ၊ ပေစာ၊ ကျောက်စာ၊ ပရပိုက်နဲ့။ ငွေဒင်္ဂါးတွေ ၊ ဘုရားပုထိုးတွေ ၊ စေတီတွေ ၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ရတုရကန်တွေ ၊ကဗျာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရှေးရခိုင်စာဆိုတော်များဟာ အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့စာပေတွေကို ရေးသား သီကုံးခဲ့ ကြတယ် ။ အဲဒီလို ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကို မင်းလေ့လာရမယ် မောင်ဇါနည်။ ဒီနောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရာဇ၀င်သမိုင်းတွေကို မင်းသေသေချာချာ လေ့လာရမယ်။ အဲဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာ အခုမင်းက သက်တော်ရှာကျော်ရှည်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ဒီသမိုင်းလိမ် ဘ၈င်္လီ လူမျိုးတွေရဲ့နာမည်တလုံးတပါဒမျှ ပါလာတာတွေ့ ရင် မင်းဟာ ပညာရှင် တယောက်ဘဲလို့ကိုယ်က ပြောမယ် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲဒီခေတ်က ရခိုင်ရာဇ၀င်သမိုင်းနဲ့မြန်မာရာဇ၀င်သမိုင်းတွေမှာ အခုလို သူတို့ ကိုယ် သူတို့ က ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးလို့ ခေါ်တဲ့နာမည်ကို ရေးဖွဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ ရင် အဖမ်းဆီး ခံရနိုင်စရာ အကြောင်းမှ မရှိခဲ့တာကိုး ။ သမိုင်းသုတေသီတွေဟာ အရှိကို အရှိအတိုင်း မှတ်တမ်း တင်တတ်ကြတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့လူမျိုးလိမ် နာမည်နဲ့လူမျိုး အယောင်ဆောင်မှူဟာ အဲဒီအချိန်က တကယ်မရှိခဲ့ တဲ့အတွက် မှတ်တမ်းမတင်ဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့ ကွ ။
ကောင်းပါပြီ ။ တကယ်လို့သူတို့ပြောပြတဲ့သမိုင်းကို မင်းက လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြပြီး မင်းက တွေ့ ဆုံရှင်းလင်းချင်ခြင်း ။ ညီလာခံပြုလုပ်လိုခြင်း ဆိုရင်လဲ ရတာပါဘဲ ။ တခုတော့ ရှိတယ်နော် ။ မင်းသက်သေပြချင်တဲ့အားလုံးဟူသမျှကို -နေရာဟူသမျ-ကိုယ်တို့ က စေတနာသန့် သန့် နဲ့လိုက်လံ ပြပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ခါ ဒီစာကို ဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာ မင်းရဲ့ရွှေယောက်ဖတော် ဆီက ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အဦများ ရှိတယ် ဆိုရင် ပြ၊ ငွေဒင်္ဂါးတွေ ရှိရင် ပြပါ။ သက်ကြီးရွယ်အို ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်မြို့ နယ်မှာဖြင့် ရှိနေပါသေးတယ် ဆိုတာကို ပြောပါလို့မင်းပြောပြရလ်ိမ့်မယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုရင် မင်းက ထောက်ခံနေတဲ့ သမိုင်းလိမ် ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဟာ မောင်တောမှာ ဘင်္ဂလီမူဆလင် လူမျိုး ဖြစ်နေပြီး မင်းနဲ့ တွေ့ နေတဲ့လူတွေက သူတို့ ပြောသလို ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးပါလို့ပြောရင့်မဟုတ်သေးဘူးကွ ။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့ မောင်တောမှာရှိနေတာက သူ့ မိဖတွေနဲ့ယောက္ခမတွေ ၊ သူ့ညီအကို အရင်းခေါက်ခေါက်တွေ ဖြစ်နေလို့ကွ ။ သူတို့ က အဲဒီနာမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်မှာ လူမျိုးအဖြစ် မဖေါ်ပြထားကြဘူးလေ။ ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ်။ ဒီကောင်တွေက ဘယ်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာမှ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် ဒီလို သမိုင်းလိမ်နာမည်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ ဘူးကွ ။
ဒါကြောင့်မို့ လို့မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလားပြည်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သွားမဲ့စီမံကိန်းကို လုံးဝဥသုံ ထောက်ခံနေတဲ့မောင်ဇါနည်ဟာ ရခိုင်သမိုင်းနဲ့မြန်မာသမိုင်းတွေကို မြန်မာလူမျိုးပီပီ ပိုမိုသိနိုင်အောင် လေ့လာမှတ်သားရမယ် ။ ပြီးတော့ ဘာမှ မသိဘဲနဲ့အခုလို ငွေကြေးတပြားတချပ်ရလိုရငြား ဖြစ်ချင်လို့လုပ်နေတာကို ရပ်တန့် က ရပ်ရန်ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလိုက်တယ်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 12:14 PM
Maung Zarni is alakar... phyoot khyar...
Kalar isadanger to not only our society but also other societies also .. We no need to keep hatred for them... but we must know this truth.. ask yourself how to protect yourself..
If we don't consider about the modern colony of the neighboring countries, there will be no Myanmar in near future. We had already known about India and China but we forgot Bangladesh. The main problem in Bangladesh is how to accommodate and employ their massively increasing citizens. There is shortage of basic food and increasing in price including meat and vegetables. People are becoming very selfish and belligerent to each other to possess one micro position. The most populated city, Dhaka will face the problem of water shortage in coming five years because underground water level is depleting3meters each year. There are buildings everywhere and no free land space to refill the underground water aquifers. So, they are madly in need of flourished place to accommodate their people and solve their shortages. So, take care of our lovely land Myanmar from those inhumane Muslim people.
အမေရိကားက ဂေါက်သီးမိုးသီးဇွန်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူဆလင်လား။ ဖြေပေးကြပါ။ သိချင်လို့ ။
ဇာနည်ဆိုတဲ့ကောင် ခွေးလောက်တောင် အတွေးအခေါ်မရှိတဲ့ကောင်။
Anti Liar Group said...
ဇာနည်က လူမှ ဟုတ်ရဲ့လား..။
ထမင်းတလုပ်စားဖို့တွက် ပြည်ကိုရောင်းစားနေတဲ့သူတွေ..။ မင်းတို့စားတဲ့ ထမင်းက ခွေးတွေကို ကျွေးတာလောက်တောင် တန်ဖိုးရှိပါမလား..။ ခွေးတွေက ပိုင်ရှင်က ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ နဲ့ ကျွေးတာကို သူ့တို့က စားတာ။ မင်းတို့မြန်မာနိူင်ငံတွက် ဒီမိုကရေစီကို ခုထုံးလုပ်ပြီး ပြည်ကိုရောင်းစားနေတာက မင်းတိုးစားတဲ့ ထမင်းတလုပ်က ခွေးကိုကျွေးခဲ့ ထမင်းတလုပ်လောက် တန်ဖိုးမရှိဘူး...။
မင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာပညာကို ပြည်ကိုရောင်းစားဖို့ သင်လာတာာလား..။
Good... Thank you, writer for our mother land... Please read our brothers and sisters